Ezona ncwadi zintle kulo nyaka ka-2016 | Uncwadi lwangoku
Ezona ncwadi zintle kulo nyaka
Unyaka ka-2016 uthi ndlela-ntle kuthi, nokuba ungcono okanye ungalunganga (kuxhomekeke kakhulu kumava obomi bomntu ngamnye) kwaye sifuna ukukhumbula nani nonke, bafundi bethu, ezaye zaba zezona ncwadi zibalaseleyo kulo nyaka. Uninzi lwezinto ezilungileyo ziye zapapashwa phantse ngomzuzu wokugqibela (kule nyanga kaDisemba) njengoko kunjalo kwisihloko sokugqibela sesaga «Isithunzi somoya», "ILabyrinth yomoya" kwaye abanye bawuqale unyaka wabo… Kodwa apha siza kuvavanya ezona zilungileyo, ziya kuba yintoni? Zeziphi ezona ncwadi zibalaseleyo zika-2016 kuwe?
1 "Ilifa eliqalekisiweyo" likaJK Rowling
2 "Incwadi yesandla yokucoca abafazi" nguLucia Berlin
3 «Ilizwe» nguFernando Aramburu
4 «Konke oku ndiza kukunika» nguDolores Redondo
5 «Hayi iintloni» nguPaulina Flores
"Ilifa eliqalekisiweyo" likaJK Rowling
Isihloko esitsha sombhali odumileyo soncwadi lolutsha JK Rowling Iqhubeke ukuthengiswa ngo-Septemba ophelileyo kodwa besisele siyazi ingqungquthela yayo esemthethweni ngo-2015 kwaye yakhutshwa ngumbhali ngokwakhe:
Ukuba nguHarry Potter akukaze kube ngumsebenzi olula, nangaphantsi koku kuba waba ngumsebenzi oxakeke kakhulu kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezobugcisa, indoda etshatileyo kunye notata wabantwana abathathu. Kwaye ukuba uHarry ujongene nexesha elidlulileyo elala ukushiyeka ngasemva, unyana wakhe omncinci, uAlbus Severus, kufuneka alwe nobunzima belifa losapho angazange afune ukwazi ngalo. Xa ikamva lidibanisa okwangoku kunye nexesha langoku, utata kunye nonyana kufuneka bajongane nenyaniso engathandekiyo: ngamanye amaxesha, ubumnyama buvela kwindawo encinci yokucinga.
Uhlelo lweSpanish lwathathwa Iinguqulelo zeSalamandra. Ukuba awukayifundi okwangoku kwaye ungumlandeli weSaga kaHarry Potter, oku akunakuphoswa zishelufa zakho. Isenokuba sisihloko esihle ukubuza la madoda aZilumkileyo aThathu, ukuba nokuba sele kuhlwile, kuba ayimilingo, angenza yonke into? Inyaniso?
"Incwadi yesandla yokucoca abafazi" nguLucia Berlin
Ngalesi sihloko "sahlukileyo", incwadi kaLucia Berlin esandula ukufunyanwa yazalwa. NguAlfaguara owapapasha ngo-Matshi 2016 kwaye ibiyikopi yokuthengisa engayeki. Umsebenzi oguqulelwe kwiilwimi ezili-14 ezahlukeneyo kwaye wanconywa kakhulu ngabagxeki boncwadi. Amagqabantshintshi asemthethweni ngolu hlobo lulandelayo:
Ngonxibelelwano olungenakuthelekiswa nanto loburharha kunye nokudakumba, iBerlin yatsho ngobomi bakhe obothusayo kunye nobunzima ukwenza imimangaliso yokwenene yoncwadi ngeziqendu zemihla ngemihla. Abafazi kumabali akhe baphazamisekile, kodwa kwangaxeshanye bomelele, banengqondo kwaye, ngaphezu kwako konke, bokwenene ngokungaqhelekanga. Bayhleka, bayakhala, bayathanda, bayasela, bayasinda.
Enye yezona zinto zilungileyo kulo nyaka, ngaphandle kwamathandabuzo.
«Ilizwe» nguFernando Aramburu
Ngeli gama likazwelonke kwaye elinika iintloko ezininzi kwilizwe lethu, libizwa UFernando Aramburu kwincwadi yakhe entsha. Asazi ukuba ligama elitsale umdla wabafundi okanye ikharityhulamu yoncwadi yaseAramburu, kodwa "Ilizwe lakowethu" ngokungathandabuzekiyo yenye yeencwadi ezilungileyo zango-2016.
Ipapashwe ngu Abahleli beeTusquets ukusukela ngoSeptemba walo nyaka kwaye ungayifumana igcinelwe ixabiso elimalunga ne-22 euros.
Isishwankathelo: Umhla we-ETA ubhengeza ukushiywa kweengalo, uBittori uya emangcwabeni ukuya kuxela ingcwaba lomyeni wakhe, uTxato, obulewe ngabanqolobi, ukuba uthathe isigqibo sokubuyela endlwini ababehlala kuyo. Ngaba uza kukwazi ukuhlala nabo babemngcungcuthekisa ngaphambili nasemva kohlaselo oluphazamise ubomi bakhe nobosapho? Ngaba uya kuba nakho ukwazi ukuba ngubani le ndoda yayambethe indoda eyabulala umyeni wayo ngenye imini eyayinemvula, xa yayibuya kwinkampani yayo yezothutho? Kungakhathaliseki ukuba ubuqhetseba kangakanani, ubukho bukaBittori buya kuguqula uxolo lwedolophu, ngakumbi ummelwane wakhe uMiren, owayengumhlobo osondeleyo kunye nomama kaJoxe Mari, umgubhi ovalelweyo kwaye wayekrokrelwa kakhulu. Kwenzeka ntoni phakathi kwabo bafazi babini? Yintoni le ityhefe ubomi babantwana bakho kunye nabayeni babo abasondeleyo ngaphambili? Ngeenyembezi zabo ezifihliweyo kunye nokugwetywa okungagungqiyo, ngamanxeba abo kunye nobukroti babo, ibali le-incandescent lobomi babo ngaphambi nasemva komgxobhozo owawukukufa kukaTxato, uthetha nathi ngokungabinakwenzeka ukulibala kunye nesidingo sokuxolelwa kwindawo eyaphukileyo. ngokuzibaxa kwezopolitiko.
«Konke oku ndiza kukunika» nguDolores Redondo
Uwongwe nge Imbasa yePlanethi 2016, lo msebenzi we UDolores Redondo Ngomnye wabathengisi abathengisayo kulo nyaka kumshicileli. Isishwankathelo sayo ngolu hlobo lulandelayo:
Kwindawo entle yeRibeira Sacra, u-vlvaro ufumana ingozi eza kuphelisa ubomi bakhe. Xa uManuel, umyeni wakhe, efika eGalicia ezokwamkela umzimba, ufumanisa ukuba uphando kwityala luvaliwe ngokukhawuleza. Ukulahlwa lusapho lwakhe olunamandla lwezopolitiko, u-Muñiz de Dávila, kumnyanzela ukuba abaleke kodwa abambe isityholo ngokuchasene nokungafumani sohlwayo sokuba u-Nogueira, umlindi woluntu osethathe umhlala-phantsi, ehlasela usapho luka-vlvaro, amanene azama amalungelo abo, kwaye urhano lokuba ayisiyiyo le ukufa kokuqala kwindawo yakhe egutyungelwe ngengozi. ULucas, umhlobo ongumfundisi osusela ebuntwaneni buka-vlvaro, ujoyina uManuel noNogueira ekwakheni kwakhona ubomi obuyimfihlo ababecinga ukuba babazi kakuhle. Ubuhlobo obungalindelwanga bala madoda mathathu ngaphandle kobunye obubonakalayo banceda uManuel ukuba ahambe phakathi kothando lokuba ngubani umyeni wakhe kunye nokuhlushwa ngenxa yokuhlala nomqolo wakhe kwinyani, ekhuselwe ngasemva kwitshimera yehlabathi lakhe njengombhali. Yindlela eya kuqala ngayo ukukhangela inyani, endaweni yeenkolelo ezomeleleyo kunye namasiko aneengcambu apho ingcinga engapheliyo iphela idibanisa onke amachaphaza.
«Hayi iintloni» nguPaulina Flores
Con UPaulina Flores Saphinda safumanisa umgangatho woncwadi waseChile. "Yeyiphi intloni" le yincwadi enamabali ali-9 apho inika umbono okhululweyo, ukunyaniseka okungathethekiyo, ngobomi bangoku ezidolophini: abasetyhini abahlala kwizakhiwo zokuhlala; amadoda athi, ngokuphulukana nemisebenzi, atyhile iziseko ezibuthathaka ezixhasa usapho; abantu abancinci abasebenza kumathala eencwadi okanye kwiindawo ezithengisa ukutya okukhawulezileyo, kwaye abawukhumbulayo umhla abenza ngawo ubusela obuncinane, izizathu ezibakhokelele bohlukane okanye loo mzuzu xa ngokuqinisekileyo baphulukene nobumsulwa babo.
Ngaba ucinga ukuba ezi ncwadi kufanelekile ukuba zibe kolu luhlu? Zeziphi ezona ncwadi uzithandayo ezipapashwe kulo nyaka?
Kwaye ukuba asibonani, siyathemba, ukusuka kwi-Actualidad Literatura, ukuba nino-2017 wonwabile, ugcwele ukufundwa okuhle ... Sala kakuhle 2016!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezona ncwadi zintle kulo nyaka
Oyena mhlobo ungabonakaliyo weencwadi ube yimpumelelo